PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - Ushiye isigubhukane owokhozi FM
Uthi kakulona iqiniso okukhulunywayo ngaye nomphathi Wezinhlelo
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Front Page - ZOWAKHA MBATHA
WESULE emsebenzini kungazelele muntu umdidiyeli wezinhlelo okhozini FM usma Mbatha, oshade nempunyela yakwamathibeli ucalvin.
Usma usule ngolwesine nokuyilo agcine ngalo emsebenzini wokudidiyela uhlelo lwantambama iwoza Nabangani Bakho olwethulwa ngutshatha Ngobe ngokubambisana noselby Mkhize.
Uphinde adidiyele nolukamasikandi lwangomgqibelo usigiya Ngengoma, olwethulwa ngunkosinathi Mshengu nobheka Mchunu.
Abazishwashwathayo bathi ushiya nje yingoba bese bumuncu ubudlelwano bakhe nomphathi Wezinhlelo uzandile Tembe.
Kuke kwabikwa kaningana emithonjeni yabezindaba ukuthi laba kabatholani, kwathiwa ingxabano yabo isukela endabeni engahlangene nomsebenzi kodwa imayelana nesikweletu semali thizeni okwakubolekwane yona.
Nokho bona bebeyiphika indaba yalesi sikweletu. Kuthiwa usma ufike emsebenzini wazisa yena uzandile ukuthi hhayi ucu kalusahlangani, kwahlukanwa kanjalo ngalolo suku.
Ethintwa YILANGA Langesonto akazange ashone ezintangeni njengoba ubejwayele ukwenza kodwa uvele wavuma ukuthi impela use- hlukene nokhozi FM.
“Akukho lutho esingalukhomba sithi luholele ekwesuleni kwami ngale kokuthi bese kuyisikhathi sokuba ngihambe. Kangishiyile futhi emsakazweni kodwa ngishiye okhozini FM.
“Thina esisebenza ngezinkontileka kakunasidingo sokuba sifake incwadi yokwesula kusenesikhathi ngenxa yemigomo esiqashwa ngaphansi kwayo.
“Mina ngikholelwa wukuthi umuntu akwazi ukuzimela, yikho lokhu-ke okungenze ngashiya emuva kweminyaka eyi-6 ngikhona, kusukela ngowezi-2011. Ngiyezwa nje abantu bekhuluma nge- ndaba yami nozandi kodwa kalikho iqiniso kulokho, bamane bayahlawumbisela nje. Akangikweleti mina uzandi,” usho kanje usma.
Efika kulo msakazo ubedidiyela uhlelo ivuka Mzansi obelethulwa ngulinda Sibiya, abahlomule ngalo izindondo bathola nokuxhaswa ngemikhiqizo ethize.
Nakus'giya Ngengoma bake bayithola indondo. Uphinde wethula imikhankaso ebe yimpumelelo njenge-africa Month nezigatshana ezidlisayo njengesithi “Umkhulu/ Ugogo Wami Usezintweni” esithandwe kakhulu ohlelweni lwantambama nokunye okuningi.
Ngaphambi kokujoyina umsakazo ube ngumlingisi emidlalweni eminingi yethelevishini. Umnu Bonga Mpanza, ongumphathi woKhozi FM ukhuze ibhadi ethintwa ngalolu daba.
“Hhayi cha niyakwazi bo ukuzinuka izindaba, selulapho kinina njalo? Impela wesulile futhi siyakwamukela nakuba kungeyona into enhle kodwa kasikwazi ukumvimba.
Usebenze kahle kakhulu,” kusho umpanza ngamafushane. Uthi okwamanje basazofaka umuntu ozobamba bese beqasha ozongena esikhaleni sakhe ngokugcwele ngenyanga ezayo.
Hhayi cha niyakwazi ukuzinuka izindaba, selulapho kinina njalo? Impela wesulile...
NGUSMA Mbatha-mathibeli oshiye isigubhukane okhozini FM.